Queen's University - Study in Canada. Waxbarashada Abroad Magazine
Queen ayaa University Details
gaabinta : qu
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Queen
Qor Jaamacadda Queen
Jaamacadda Queen ayaa ku hardiyi xadka waxa lagu gaadhi karo iyo horumarinta fikradaha keeni kara isbedel ah ee dunida.
In ka badan 170 sano, bulshada ayaa ka badan ururinta a maankoodu dhalaalaya - Queen ayaa soo jiitay dad la jinni hami. Waxaan qiyaasi waxa mustaqbalka waxay noqon kartaa, iyo wada shaqeeyaan si ay u ogaadaan.
Queen ayaa waxa uu ku yaalaa magaalada Kingston, Ontario, Canada, badhkiis la gaadhsiiyey dhexeeya Montreal iyo Toronto, laba ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee Kanada. Kingston waxaa ku taal xeebaha ee Lake Ontario, u dhow iridda St ah. Lawrence Seaway, Kun Islands iyo Canal Rideau ah.
Habka ugu fiican ee si aad u hesho in la ogaado Queen waa ay soo socda in ay soo booqdaan. Baadh dhismayaasha taariikhiga ah our, dhigtaan xafladaha dhaqanka, oo in muddo ah ku bixisaan, matxafyada our distinguished, archives, iyo balbalooyinkii.
Jaamacadda Queen waa bulsho, 170+ sano dhaqanka, tacliin heer sare, cilmi, iyo campus biyaha hortooda qurux badan dhigay dhismayaasha shamiindo iyo goobaha casri ah. Laakiin in ka badan wax Queen waa dadka.
Waxaan nahay cilmi, culimada, fanaaniinta, Professor iyo ardayda ruux hami kuwaas oo doonaya inay horumariyaan fikrado keeni kara isbedel ah ee dunida. Dadka wada qiyaasi waxa mustaqbalka ay noqon kartaa oo wada shaqeeyaan si ay u ogaadaan.
Queen waa mid ka mid ah hay'adaha shahaado-bixinta ugu da'da weyn ee Kanada, waxaana uu saamayn waxbarashada sare Canadian tan 1841 markii la aasaasay by Royal Charter of Queen Victoria.
Waxay ku taallaa in Kingston, Ontario, Canada, waa jaamacad bartamihii yimaa-dhowr kulliyadood a, kulliyadaha iyo dugsiyada xirfadeed, iyo sidoo kale Bader International Centre Study ee ku yaalla Herstmonceux, East Sussex, Boqortooyada Ingiriiska.
Queen ayaa kafado sare ee waxbarashada undergraduate la si fiican-la aasaasay iyo barnaamijyada ka qalin cusub, dhammaan gudahood jawi waxbarasho oo firfircoon.
Queen waa a spectrum buuxa, cilmi-degdeg ah jaamacad in sameeyaa cilmi keentay-ku laayeen in noocyo kala duwan oo ah meelaha, lugu daro:
sayniska xisaabeed iyo injineernimada
cilmiga aasaasiga ah iyo caafimaad Biomedical
deegaan caafimaad iyo nidaamyada tamarta
arrimaha bulshada sida socoshada, saboolnimada iyo bullying
campus waxay leedahay shabakad si buuxda u midaysan ee lix maktabadaha iyo guriga waa in dhowr matxafyada fiican iyo xarumaha fanka, oo ay ku jiraan Agnes Etherington Centre Art iyo Bader Centre Isabel The for the Farshaxanka.
A Deegaanka Campus Community
95% dadka ardayga ka timaada meel ka baxsan Kingston
85% ardayda ku nool gudaha socod 15 daqiiqo ah si ay u campus
in ka badan 90% of-sanadka ugu horeeya ardayda ku nool degaan (joogitaanka waa guaranteedfor-sano ee ugu horeysa; labo deegaan oo cusub ka furi doonaa Fall 2015!)
Queen ayaa guriga waa in ardayda ka badan 109 dal oo kala duwan
ardayda / fiisada International dhigi ilaa qiyaastii 8.3% dadka waqti-buuxa ah ardayga.
Kuliyada Arts iyo Science
In ka Kuliyada Arts iyo Science, ardeyda baahida gaarka ah u bartaan si ay u falanqeeyaan iyo qabaa adag, isgaadhsiin iyo dood, fasiri iyo madax bannaan xukumi – xirfadaha la dib markii raadinayo barnaamijyada postgraduate, dugsiyada xirfadeed, iyo loo shaqeeyaha!
Art Taariikhda iyo Ilaalinta
Dan School of Drama oo Music
English Language iyo Suugaanta
Film iyo Media
Art Fine (Art muuqaal ah)
Juqraafiga iyo Qorshaynta
Geological Sciences iyo Geological Engineering
Kinesiology iyo Caafimaadka Studies
Languages, Literatures iyo Dhaqammada
Life Sciences iyo Kiimikada noole: Life Sciences | Kiimikada noole
Xisaabta iyo Statistics
physics, Engineering Physics iyo xiddigaha
The Kuliyada Waxbarashada uu yeesho horumar, anshaxa, awoodda, iyo madaxda maskax leh ee waxbarashada waxbarid, cilmi, iyo iskaashiga xirfadeed.
Kulliyadda Engineering iyo Applied Science
injineerada Queen kibirkiisu qaataan dhaqan joogta ah ee guusha, labada tacliin iyo raad manhajka, in saameyn ku leh adduunka ku wareegsan leeyihiin. In jawi iskaashi, ma tartanka, this dual diiradda ayaa ka caawiyay dhigi Queen ee Kulliyadda Engineering iyo Applied Science hogaamiye caalami ah oo waxbarashada injineernimada. Dhammaan ardayda injineernimada galaya sannad caadi ah marka hore, oo iyaga oo si kala duwan ee ka buuxa nidaamo injineernimada.
Farsamada iyo Qalabka Engineering
The Kuliyadda Sayniska Caafimaadka (koobay Dugsiyada of Medicine, Nursing, iyo Rehabilitation Therapy) fiican oo dhan ee waajibaadka ay waxbarashada, daryeelka caafimaadka, iyo cilmi baaris. iskaashi xoog leh guud ahaan dugsiyada, Caqlina, iyo shuraako hay'adaha waa astaamaha ee tacliinta xarunta cilmiga caafimaadka Queen.
Xasaasiyadda iyo immunology
Anesthesiology iyo Perioperative Medicine
Biomedical iyo kelli Sciences
Wadnaha, Wareegga dhiigga iyo neefsiga (CCR) Barnaamijka
Barnaamijka Medicine Care Halis
Endocrinology iyo shiid
General Medicine Gudaha
Hematology, Dhakhtar, debcinta xanuunka, iyo Bioethics
Barnaamijka Sayniska Nolosha
Barnaamijka Graduate Neuroscience
Studies Neuroscience, Xarunta
Barnaamijka Palliative Care Medicine
Pathology iyo kelli Medicine
Daawada Jirka iyo Rehabilitation
Sciences Caafimaadka Dadweynaha (hore Health Community iyo Faafa)
Barnaamijka waayeelka Regional
Neefsiga oo Halis Care Medicine
Qalliinka xubin badalida
Iyadoo dhaqan faani bulshada, collegiality, iyo adeeg, Queen ee Kulliyadda Law uu yeesho xirfad sharci fiican leh aragti caalami ah iyo horumarka ee fahamka iyo horumarinta sharciga iyada oo u go'ay, cilmiga cusub iyo deeqda waxbarasho.
School Smith ee Business Jaamacadda Queen, mid ka mid ah dugsiyada ganacsiga Premier dunida ee, kasbatay ay aqoonsi caalami ah iyada oo loo marayo awood iyo habab cusub oo ay u fiican waxbarashada ganacsiga. Dugsiga uu yeesho madaxda fiican leh aragti caalami ah oo abuuri aqoon cusub oo horumarka ganacsiga iyo bulshada.
The School of Studies Graduate dalabyo 120 Barnaamijyada shahaado gudahood 50+ waaxyaha iyo xarumaha cilmi-baarista si ay u eegaan. Iyada oo University School Queen of Studies Graduate, ardayda dhigay fikradahooda dhaqaaq iyo in la abuuro saameyn ku leh dunida.
School of Daraasaadka Siyaasadda
The School of Daraasaadka Siyaasadda waa xarun keentay waxbarashada sare, cilmi, dood iyo in la dhexgalo dunida non-tacliimeed ee beerihii siyaasadda guud iyo maamulka.
Queen ayaa ahaa sabab u ah farac ka mid ah dadaallada waxbarasho ee la qorsheeyey by Presbyterians ee 1830s ah. Qorshaha A qabyo ah jaamacadda waxaa lagu soo bandhigay kulanka Synod ah ee Kingston ee 1839, la biil modified soo bandhigay iyada oo loo marayo Baarlamaanka 13aad ee Upper Canada inta lagu guda jiro kalfadhiga ah 1840. On 16 October 1841, charter boqornimo la soo saaray iyada oo Queen Victoria. Queen ayaa ka sano ka ah dadaal ay Presbyterians of Upper Canada in ay heleen machad waxbarasho ee wasiirada in gumeysi sii kordhaysa iyo in baro dhalinyarada ee laamaha kala duwan ee sayniska iyo suugaanta keentay. Waxay qaabeeyey jaamacadda ka dib markii University of Edinburgh iyo University of Glasgow. Fasallada bilaabay on 7 March 1842, guriga qoryo-jir yar qarkii magaaladii iyadoo laba khabiir oo 15 ardayda.
college ayaa u dhaqaaqay dhowr jeer inta lagu jiro kow iyo toban sannadood ee ugu horeysay, ka hor inta gelida ay goob jooga. Ka hor inta aan Canadian Confederation, college waxaa taageero dhaqaale ay kaga Church Presbyterian ee Scotland, Dawladda Canada iyo muwaadiniinta gaarka ah. Ka dib markii Confederation kulliyadda wajahay baabba 'markii xukuumadda federaalka ka baxeen ay maalgelin iyo dumay Bangiga Ganacsiga ee Degmada Midland ah, musiibo oo lacag saddex-meelood laba Queen ee ay hibeynta. college ayaa la soo badbaadiyay kadib markii Maamulaha William Snodgrass iyo saraakiil kale oo abuuray olole lacag ururin ah ee guud ahaan Kanada.
Halista dhaqaale ahaan burburto sii waday in ay ka walwalaan maamulka ilaa tobankii sano ee ugu danbeeyay ee qarnigii. Waxay si firfircoon u fiirsay inuu ka tago Kingston oo ku biirtay Jaamacadda Toronto goor danbe oo 1880 ka. Iyada oo lacag dheeraad ah ka sokay ugu horeysay ee waaweyn ee Queen Dulsan, Robert Sutherland, kulliyadda staved off failure dhaqaale oo la hayo ay xorriyadda. Queen ayaa la siiyey xaaladda jaamacadda on 17 Laga yaabaa 1881. In 1883, Haweenka College Medical la aasaasay at Queen ee fasalka ka mid ah saddex. fiqi Hall, gabagabeeyey 1880, asal ahaan u adeegay sidii dhismaha weyn ee Queen oo dhan qarnigii 19aad.
In 1912, Queen ayaa kala Church Presbyterian ee Scotland iyo badalin magaca Jaamacadda Queen ee Kingston. Queen ayaa fiqi College hadhay in ay gacanta of Church Presbyterian ee Kanada, ilaa 1925, marka ay soo biiray Church United ee Kanada, halkaas oo weli maanta. Jaamacadda wajahay dhibaatooyin kale oo dhaqaale lagu jiro Dagaalkii Adduunka, dhibic fiiqan ee diiwaangelinta ay sabab u tahay enlistment ciidamada ardayda, shaqaalaha, iyo macalimiinta. A $1,000,000 drive ururinta iyo heshiis xabbad joojin ah in 1918 badbaadiyey jaamacadda. Qiyaastii 1,500 ardayda ka qayb qaatay dagaalka iyo 187 dhintay. Months Kanada ka hor ku biiray dagaalkii labaad ee dunida, Madaxweynaha Maraykanka Franklin D. Roosevelt, si Queen ayaa yimid si ay u aqbalaan shahaado sharaf iyo, in baahinta a maqlay adduunka oo dhan, ka hadlay siyaasadda American ah isbahaysiga labada dhinac oo la saaxiibin Canada. Inta lagu jiro dagaalkii labaad ee dunida, 2,917 qalin ka Queen ayaa u adeegay in ciidamada qalabka sida, qaba 164 dhimashada. Room Memorial ee Memorial Hall of Centre John Deutsch Jaamacadda taxan ardayda kuwa Queen ayaa ku dhintay dagaallo inta lagu guda jiro dunida.
Queen ayaa si deg deg ah ku koray ka dib markii dagaalka, gano by balaadhinta dhaqaalaha guudahaan iyo kaca ee dadka in halkii 1960. From 1951 si ay u 1961, diiwaan gelinta ku kordheen tan iyo ka badan 2,000 ardayda in ay ka badan 3,000. Jaamacadda bilawday barnaamij dhisme, dhismaha shan deegaan ardayga ka yar toban sano.
Ka dib habeynta waxbarashada sharciga ee Ontario ee bartamihii 1950-, Queen ee Kulliyadda Law furay 1957 ee dhawaan la dhisay John A. Macdonald Hall. Mashaariicda kale ee dhismaha garoonka Queen ee 1950 ka mid ahaa dhismaha Richardson Hall inay guri xafiisyada maamulka Queen, iyo Dunning Hall. By dhamaadka 1960, sida jaamacadaha kale oo badan ee Kanada, Queen ayaa saddex laab ay diiwaan gelinta iyo aad buu balaariyay ay awood, shaqaalaha, iyo xarumaha, iyadoo ay sabab u kaca ilmaha iyo taageero deeqsi ka qaybta dadweynaha. By bartamihii 1970-, tirada ardayda waqti-buuxa ah ay gaareen 10,000. Waxaa ka mid ah goobaha cusub waxay ahaayeen saddex ka badan guryaha iyo dhismayaasha gaar ah u Departments of Mathematics, physics, Biology iyo Psychology, Cilmiga bulshada iyo Humanities ah.
Muddadan Schools of Music, Maamulka Dadweynaha (hadda qayb ka mid ah Daraasaadka Siyaasadda), Therapy Rehabilitation, iyo Urban iyo Qorsheynta Gobolka ayaa waxaa la aasaasay at Queen. Dhismaha Kuliyada Waxbarashada ee 1968 on dalka saabsan galbeed kiiloomitir ee jaamacadda a caleemo campus galbeed ee jaamacadda.
Queen ayaa u dabaal-guuradii sesquicentennial in 1991, oo waxaa soo booqday by Charles, Prince of Wales, oo uu markaas-xaaskiisa, Diana, si ay u xusaan munaasabadda. The Prince of Wales bandhigay replica ka mid ah 1841 Royal Charter siiyo by Queen Victoria, taas oo la aasaasay jaamacadda; replica la soo bandhigay ee Xarunta John Deutsch Jaamacadda. The madax sare haweeneydii ugu horeysay ee Jaamacadda Queen, Agnes Richardson Benidikson, lagu rakibay on 23 October 1980. In 1993, Queen ayaa helay Herstmonceux Castle sida deeq ka laabo Alfred Bader. qalcaddii waxaa loo isticmaalaa by jaamacadda sida Centre Bader Daraasaadka Caalamiga ah.
In 2001 Guddiga Senate Equity Waxbarashada (SEEC) bartay aragnimada laga tirada badan la arki karo iyo xubnaha awood Aboriginal ee Queen ka dib markii a professor dumar madow tagay, eedaynaysa in ay la kulantay cunsuriyad. Ka dib markii sahan this SEEC wakiishay daraasad taas oo lagu ogaaday in qaar badan oo gartay a 'Culture of isakaga’ jaamacadda. Warbixinta ayaa soo gabagabeeyey in "mudnaan cad oo awood sii wadaan in ay ka muuqan in Eurocentriccurricula ah, hababka dhaqanka waxbarashada, shaqaalaynta, dhaqanka horumarinta iyo muddada, iyo fursadaha cilmi "at Queen. jawaab jaamacadda ayaa lagu sheegay warbixinta waa mawduuca of dood sii. Maamulka fuliyo tallaabooyin si kor loogu qaado kala duwanaanta bilaabo 2006, sida jagada taliyaha kala duwanaanta iyo shaqaalaynta ee “Kormeerayaasha wadahadal” si loo fududeeyo doodaha ku saabsan caddaaladda bulshada.
In May 2010, Jaamacadda Queen ayaa ku biiray Network Matariki ee Jaamacadaha, koox caalami ah jaamacadaha abuuray 2010, kaas oo diiradda on links xooggan ee ka dhexeeya cilmi-baarista iyo waxbaridda undergraduate.
Ma rabtaa wada hadlaan University Queen ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Jaamacadda Queen ee Map
Photos: Jaamacadda Queen rasmiga ah Facebook
dib u eegista Queen ayaa University
Ku biir si ay ugala hadlaan of University Queen.